China dochie ọdịnala ọdịnala na Sekwa ​​akwa 20Khz Ultrasonic Welding Machine maka Thermoplastic akwa Manufacture and Factory | Qianrong
Dochie anya agịga ọdịnala na ịkwa akwa 20Khz Ultrasonic Welding Machine maka Thermoplastic akwa
Nkebi Nke QR-S20DL
Obosara nke ịgbado ọkụ wheel 22mm
Dakọtara Transducer 5020-4D PZT4
Generator nha 400 * 195 * 98mm
Ultrasonic ịkwa akwa igwe isi nwere ike ịkwanye ọtụtụ akwa thermoplastic. E jiri ya tụnyere agịga nkịtị na ịkwa akwa, ultrasonic ịkwa akwa anaghị achọ agịga na eri, akwa akwa akwa, akwa akara na ọsọ ọsọ ọsọ. Na ntughari na-enweghị ntụpọ nke ultrasonic na-edozi nsogbu ahụ kpamkpam na nduzi ngagharị nke isi na-ekpo ọkụ nke ultrasonic adịghị ekwekọ na usoro ngagharị nke ákwà ahụ, na nsogbu nke enweghị mmekọrịta ga-eji dochie igwe akwa akwa nkịtị.
Uru nke nkwekọ na-enweghị ntụpọ
1. Nnukwu nkwụsi ike: Thegbado ọkụ na wiil mgbali na-agbagharị kpamkpam na-arụ ọrụ n'oge ultrasonic na-enweghị ntụpọ, enweghị ọdịiche dị na ọsọ na akuku, ọ gaghịkwa eme ka ịgbatị, mgbagha ma ọ bụ nrụrụ nke akwa ahụ, nke dị oke mma. N'ihi mmetụta na-ekpo ọkụ na-agbaze, ọ dịghị mkpa iji eriri agịga, ngwaahịa ahụ na-adị mmiri na-adịghị, dị mfe ma dị mfe okpukpu.
2. eldgbado ọkụ na ịmịkọrịta mmekọrịta: Ngwaọrụ na-enweghị ntụpọ nke Ultrasonic abụghị naanị maka ịkwado na-aga n'ihu, kamakwa ọ nwere ike belata textiles ka ịgbado ọkụ, ma ghọta akpaka ọnụ banding.
3. Ọ dịghị thermal radieshon: Ike ume ihe onwunwe oyi akwa maka ịgbado ọkụ n'oge ultrasonic kpachie, na e nweghị thermal radieshon. N'oge nkedo na-aga n'ihu, a gaghị ebufe ngwaahịa na ngwaahịa ahụ, nke bara uru karịsịa maka nchịkọta nke ngwaahịa ndị nwere okpomọkụ.
4. Controllable ịgbado ọkụ onuete: A na-amịpụta akwa site na ịgbado ọkụ wheel na mgbali ala, na-agafe na ya, na ákwà na-ịgbado ọkụ site ultrasonic mmiri na ebili mmiri. Site na-agbanwe mgbali ala, ịgbado ọkụ onuete size na embossing nwere ike gbanwere.
5. Wide nso nke ngwa: All thermoplastic (nro mgbe kpo oku) akwa, pụrụ iche etere, na fim nwere ike welded iji ultrasonic enweghị nkebi kpachie akụrụngwa, na rollers na-mere nke obi tara mmiri ịgbatị ọrụ ndụ.
Nke gara aga: 20Khz Ultrasonic Plastic Welding Machine maka Thermoplastic Ihe
Osote: Nnukwu oge 35Khz 1000w Ultrasonic Sealing Equipment for Thermoplastic Cloth